Prof. Jawaari oo ku dhawaaqay in Shirka madasha Wada tashiga uu dib u dhac ku yimid – STAR FM SOMALIA
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxaa uu Magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in uu baaqday Shirkii Madasha Wadatashiga Qaran, ee 20-ka bishan lagu waday in uu ka furmo Magaaladaasi.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya oo shir jaraa’id ku qabtay Madaxtooyada Magaalada Baydhabo, ayaa si rasmi ah u sheegay in dib u dhac uu ku yimid shirkii 20-ka bishan ka furmanayay Baydhabo.
Wuxuu bidhaamiyay in shirka uu furmi doono 25-ka bishan, oo aanu qabsoomi karin waqtigii horey loogu muddeeyay in uu ku qabsoomo shirkaasi.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa wuxuu tilmaamay in Xarunta Gobolka Baay uu u yimid sidii uu u kormeeri lahaa qaabka looga qaban qaabinaayo u diyaargarowga martigelinta ee Shirka Madasha Wadatashiga Qaran.
Sidoo kale waxaa uu xusay mudada uu ku sugan yahay Magaalada Baydhabo in uu kulamo kula qaadan doono Madaxda Maamulka Koonfur Galbeed, si ay isula jeex jeexan qaabkii loo wejihi lahaa arrimaha shirka, amnigiisa iyo ka warqabka wafuuda ka soo qaybgaleysa shirka.
Shirkan ka furmanaya Magaalada Baydhabo, ayaa daba socda shirar ay horey Madaxda Dowladda Somaliya & Maamul Goboleedyada ugu yeesheen Magaalooyinka Kismaayo, Muqdisho iyo Garoowe.
Shirkan waa mid diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka guud ee billaha ina soo aadan lagu wado in ay ka qaybsooman Somaliya.
Howlgal gaar oo xalay Ciidamada ammaanka ka fuliyeen Muqdisho